Tsy miandry ny asa | NewsMada
Tsy miandry ny asa
Vita iny ny fifidianana ho ben’ny Tanàna, adidy sady zon’ny olom-pirenena tsirairay. Nisy tokoa ireo tsy afaka nisitraka izany, noho ny antony maro samihafa, fa maro koa ireo ninia “nisafidy” tsy nampiasa izany zony sy tsy nanao ny adidiny. Koa na firy na firy ny tahan’ny mpifidy, manana andraikitra hiahy ny olom-pirenena tsy ankanavaka ny ben’ny Tanàna ho lany eo fa tsy mionona eo amin’ny « mpifidy » azy intsony. Miandry « azy » ny asa hoentina hampandrosoana ny kaominina, tena mipaka mivantana eny ifotony.
Efa nanomana ny vinam-piarahamoniny sy ny fandaharanasany avy ny kandidà tsirairay. Manana ny paikady hanatanterahany azy sady tsy miankina amin’ny mpifaninana aminy tsy lany izany.
Vita ny kabary sy ny fandresen-dahatra fa ny fanatanterahana ny asa no tena andrasan’ny rehetra. Mitaky ny famadihana ny bainga ho vavolombelon’ny mpiasa. Fampandrosoana ny toekarena, ny sosialy, ny tanàna amin’ny ankapobeny amin’ny alalan’ireo fotodrafitrasa samihafa mifanaraka amin’izany, sy ny fandaminana ary ny fitantanana ny tanàna.
Tsy mila andranandrana sy fifanilihana andraikitra satria laharam-pahamehana avokoa ny asa rehetra. Mila paikady tsara rafitra ny fampandrosoana azo tsapain-tanana, ny ady amin’ny gaboraraka, ny kolikoly, ny tsy fandriam-pahalemana, sns. Misy tokoa ny kandidà efa nivonona ny amin’ireo rehetra ireo, tsy tia mifanasa vangy, ampy traikefa. Miandry am-pahatoniana ny voka-pifidianana satria efa vonona ny angady sy ny harona.
Ao koa ireo mpamerin-toerana, lany fanindroany na mihoatra izany. Manantena sy maniry ny hanohizana ny tsara vitany ny mpifidy azy sy ny vahoaka. Hotsarain’ny tantara kosa anefa izy ireny raha mitady hanao fomba hafahafa satria efa mitaky ny “tena fiovana” ny fampandrosoana. Rehefa tena zohina, tsy afaka “miandry ny asa”!